ဒီဇင်ဘာ, 1908 ။
အဆိုပါကြေညာချက်တွင်အများအပြားအကြောင်းတရားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအခြားသူများကိုဖန်ဆင်းအသံကိုကြားသောကြောင့်တချို့ကကြေညာချက်လုပ်; ရှေးဟောင်းလူမျိုး၏သမိုင်းကိုသူတို့အများကြီးကယ်ခဲ့ကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်သောကွောငျ့, ရှေးသမိုင်းနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းကြသူအချို့ကို။ ကွဲပြားခြားနားသောပြည်သူများအများ၏ကယ်လာကြဘယ်သူကိုမှလူအများ၏လိုအပ်ချက်များ, သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ကြရာကနေအထူးအရာနှင့်အညီကွဲပြားခြားနား။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကယ်တင်သောသခင်တစ်ဦးသည်နာဘေး, ဒါမှမဟုတ်အစာခေါင်းပါးသောအခါထံမှဖြစ်စေ, ရန်သူသို့မဟုတ်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်၏ကျူးကျော်ထံမှလူတွေကိုကယ်နှုတ်တော်မူထင်ရှား။ , နောက်ထပ်ကယ်တင်သောသခင်, သူတို့ကိုယဉ်ကျေးမှုရန်လိုအပ်သောအနုပညာနှင့်သိပ္ပံဘာသာစကားများသင်ပေးဖို့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှင့်နားလည်မှုများ၏သူကြမ်းကြုတ်မှ လာ. အဘယ်သူကိုမှလူအလွတ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ ဤလောက၏ဘာသာရေးစနစ်များအတန်ငယ်ကိုဖတ်ရှုခဲ့သူမည်သူမဆိုအတညျ့အလငျးသညျယရှေုမွေးဖွားခဲ့ကြဟုမိန့်သောအခါကယ်ရက်စွဲမတိုင်မီနှစ်ပေါင်းရာစုနှစ်များစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာသည်ထင်ရှားသိမြင်ပါလိမ့်မယ်။
ယရှေုသညျအားလုံးခရစ်ယာန်တို့ကကမ္ဘာကြီး၏ကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်ဟုဆိုလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောကြေငြာအားလုံးခရစ်ယာန်များ၏အဝိဇ္ဇာနှင့်မောက်မာတဲ့စာတမ်းတွင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာခရစ်ယာန်အဘို့ဤဒါမဟုတျပါဘူး။ အထူးသဖြင့်လနှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင်အနောက်ပိုင်းကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာသည်နှင့်သမိုင်းနှင့်အခြားလူမျိုး၏ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. နှင့်အတူပိုကောင်းကျွမ်းဖြစ်လာသည်နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောဖော်ရွေသောခံစားမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောမိတ်သဟာယဖွဲ့သည်အခြားလူမျိုးနှင့်မိမိတို့အယူဝါဒ၏သူတို့အားပြသလျက်ရှိသည်။ အနောက်ပိုင်းကမ္ဘာကြီးရှေးဟောင်းလူမျိုး၏စာပေဘဏ္ဍာကိုအတွင်းပါရှိသောပညာ၏စတိုးဆိုင်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့သင်ယူခဲ့သည်။ အတိတ်၏မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဂဏန်းကနေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မှရွေးချယ်တင်မြှောက်အနည်းငယ်ဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသောလူသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကို၏အဟောင်းဝိညာဉျကိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည်နှင့်၎င်း၏အရပ်ဌာန၌တရားမြှတတဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်လူအပေါင်းတို့၏အခွင့်အရေးများလာသေး၏။
ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်တစ်ရက်အဲဂုတ်တုပွညျ၌ကြီးသောဝမ်းမြောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးနှင့်တစ်ဦးပွဲတော် Horus ၏မွေးနေ့၏ဂုဏ်အသရေကျင်းပခဲ့သည်။ တရုတ်၏သန့်ရှင်းသောစာအုပ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဘာသာရေးထုံးတမ်းများနှင့်အခမ်းအနားများများထဲတွင်အခြားဟောင်းဘာသာတရား၏ပွဲတော်နီးကပ်စွာနောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအတွင်းဆောင်းယဉ်စွန်းချိန်၏အချိန်မှာ, စျေးဆိုင်များနှင့်တရားရုံးများကိုပိတ်လိုက်ရသည်။ ဘာသာရေးဓမ္မထို့နောက်ကျင်းပခဲ့ကြပြီး Tie Tien မှကျေးဇူးတင်ကြောင်း၏ပွဲတော်များဟုခေါ်ကြသည်။ ပါရှန်းမိသရအာမခံသို့မဟုတ်ကယ်တင်သောသခင်ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအကြီးအပျော်ပွဲရွှင်ပွဲခမ်းခမ်းနားနားကြားတွင်ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ပဉ္စမအပေါ်သူ၏မွေးနေ့ကျင်းပ။ ဒါဟာအဲဒီအခြိနျမှာနေရောင်နေဆဲရပ်တည်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့တောင်ဘက်၌သူ၏ရှည်လျားသောတည်းခိုခြင်းငှါပြီးနောက်မြောက်ဘက်သို့ပြန်သွားဖို့စတင်နှင့်အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ပူဇော်ဘို့ဆိတ်ကွယ်ရာကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်ခဲ့သည်။ ကနေဆောင်းယဉ်စွန်းချိန်မှသူ၏ပြန်လာစတင်ခဲ့ကြောင်းကိုအချိန်ကဖြစ်သကဲ့သို့ရောမ, Bacchus ၏ဂုဏ်အသရေ၌ကြီးစွာသောပွဲတော်နှင့်အတူဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ပဉ္စမကျင်းပခဲ့သည်။ အများအပြားပါရှအခမ်းအနားများရောမမြို့သို့မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်သည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်ကာလ၌, ထိုနေ့မိသရ, နေ၏ဝိညာဉ်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ပွဲတော်အဖြစ် solemnized ခဲ့သည်။ အဆိုပါဟိန္ဒူခြောက်လအဆက်ဆက်ပွဲတော်များရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလကလူနှစ်ဆယ်ပဉ္စမတွင်ပန်းကုံးများနှင့် gilt စက္ကူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိမ်များကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများထံသို့လက်ဆောင်ပါစေ။ ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်သကဲ့သို့ဤရက်စွဲမှာရှေးများ၏လူမျိုးအဖြစ်ကောင်းစွာကိုးကွယ်သောမြင်ကြပါလိမ့်မည်။ ကဆောင်းယဉ်စွန်းချိန်၏ထိုအချိန်ကခဲ့ကြောင်းမျှသာမတော်တဆမှုသို့မဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာအတိတ်၏အပေါငျးတို့သသိသာသတင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအတွင်းမှာနက်ရှိုင်းသောဘာသာရေးအရေးပါမှုတစ်ခုနောက်ခံအမှန်တရားလည်းမရှိ, ထိုဆိုပါစို့မှ ပို. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းပြချက်ပြန်အစောပိုင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာရဲ့ခရစ်ယာန်များစတငျရ။ ယင်းအယူမှားနှင့်အသာသနာပလူတို့ယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အယူဝါဒနှစ်ထပ်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်မိမိတို့ပြက္ခဒိန်သို့သူတို့ကိုငါ၏ပွဲတော်များထည့်သွင်း။ ဒါကနှစ်ဆရည်ရွယ်ချက်ပြန်ပြောသည်: ကသူတို့အားလူမျိုး၏ဓလေ့ထုံးစံကျေနပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကိုသစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မွငျ့မွတျဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုပါစို့မှသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏။ သို့သော်အဆိုပါပွဲတော်များနှင့်ပွဲတော်များချမှတ်အတွက်ဤသတိပေးခံရသောဝိညာဉျတျောပျောက်နှင့်မြောက်ဘက်သားတို့သညျအထဲမှထိန်းသိမ်းထားမှသာအများဆုံးမိုသင်္ကေတများ, အ Druids နှင့်ရောမဖြစ်ခဲ့သည်။ ရိုင်း orgies ကိုမှအရသာတွေ့ခဲ့ကြသည်နှင့်အပြည့်အဝလိုင်စင်ခွင့်ပြုသဖြင့်, စားကွူးခွငျးနှငျ့နှင့်မူးသောအခြိနျကာလအတွင်းမှာစွာတည်လေ၏။ အစောပိုင်းလူတို့နှင့်အတူ, သူတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ Sun ၏မိမိအသိသာသင်တန်းနှင့်နှစ်ဆယ်ပဉ္စမအနေဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ၏နိမ့်ဆုံးအမှတ်ကိုနွေဦး၏ပြန်လာစေမယ်လို့သူတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုအရာသည်သူ၏ခရီးစတင်လွန်တော်မူပြီးမှသူတို့ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကြောင့်ခဲ့ အေးနှင့်ဆောင်းရာသီ၏လူဆိတ်ညံရာကနေ။ အားလုံးနီးပါးခရစ္စမတ်၏ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပှဲ၏ရှေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဇာစ်မြစ်ရှိသည်။
In Vol ၏ '' သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ '' ။ 4, စာမျက်နှာ 189, ကခရစ်စမတ်ကဆက်လက်အဖြစ်, သော '' အလငျး၏မမြင်ရတဲ့နေရောင်, ခရစ်တော်နိယာမ၏မွေးဖွား '' ကိုဆိုလိုသည်ဟု '' လူသည်အတွင်းမွေးဖွားခံရပါ။ '' ဒီဒါသည်ဆိုပါက, ကယေရှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမွေးဖွားဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ငါးရက်နေ့တွင်ကိုလည်းခဲ့တာကိုလိုက်နာပါသနည်း
အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်နိုင်အောင်နောက်သို့မလိုက်ပါဘူး။ တကယ်တော့ကြောင့်ယေရှုအားရည်ညွှန်းအထက်တွင် "သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ၌ဖော်ပြထားသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတစ်ဆင့်နှင့်ထံမှမွေးဖွားသော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ကနေကွဲပြားခန္ဓာကိုယ်ကြောင်း။ ဒီကလေးမွေးဖွား၏ထုံးစံထွက်ရှိသတ်မှတ်နှင့်တစ်ဦးခြားနားယေရှုနှင့်ခရစ်တော်ကိုအကြားကအဲဒီမှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျမသေခြင်း insures သောခန္ဓာကိုယ်သည်။ တကယ်တော့, မသေခြင်းယရှေုသညျတိုငျအောငျမဆိုတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်မမှီကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နေိုငျကိုယျခန်ဓာကိုသူ့အဘို့မွေးဘွား၏။ ဒါဟာ, ယရှေုသညျဤသနေိုငျကိုယျခန်ဓာဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်၎င်း၏မွေးဖွားသူသေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့သည်သည်အထိလူနှင့်မဟုတ်များ၏ကယ်တင်သောသခင်တည်းဟူသောရှေးလူသိများခဲ့ပါတယ်အစဉ်အဆက်အဘယ်အရာကိုအမည်အားဖြင့်။ ဒါဟာထို့နောက်ပြုသကဲ့သို့တူညီဥပဒယနေ့ကောင်းသောရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်တဲ့သူတစ်ဦးကတခြားသူမသေနိုင်, သနေိုငျဖြစ်လာမထားပါဘူး။ သို့သော်သနေိုငျဖြစ်လာခဲ့သူတဦးတည်းသူသနေိုငျမဟုတျပါဘူးတခြား, မသေနိုင်ပါ။ က Man ထို့ကြောင့်မသေမှီမမြင်ဘူးမှီ, ဒါမှမဟုတ်တခြား reincarnate မိမိနေိုငျကိုယျခန်ဓာသညျယရှေုအားဖြင့်သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်တိုင်အောင်, reincarnate ဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုအဖြစ်သို့သော်ခရစ်တော်ဟာခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုရန်နှင့်ငါတို့အဘို့အ, ခရစ်တော်ဟာနိယာမနှင့်မပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်ခရစ်တော်၏အတွင်းမွေးဖွားရမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်၎င်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်ခရစ်တော်တည်းဟူသောနိယာမ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်အလင်းပေးကြသည်နှင့်သူတို့အရာသည်သမ္မာတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်အကြောင်း, သနေိုငျမဟုတ်သောသူတို့၏အဘို့, ကိုဆိုလိုသည်။
သူတို့သညျပညာဖြင့်အစားထိုးသည်အထိအမှားအယွင်းများနှင့်အဝိဇ္ဇာနိုင်; အသိပညာနှင့်အတူ, အဝိဇ္ဇာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအအခန်းထဲမှာမရှိပါ။ အသိပညာ၏မရှိခြင်းအတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာအသိပညာဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုလက်ခံရပေမည်။ မတူညီတဲ့ဖြစ်ရန်အတွက်အချက်အလက်များလိုသောသူတို့ကိုတစ်ဦး jot မပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ယရှေုသညျသို့မဟုတ်ခရစ်တော်၏မွေးဖွားကိုရည်မှတ်သမိုင်း၌အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်မှန်များရှိပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်များသညျယရှေုခရစျတျောကြိုတင်ဂုဏ်သတင်းကိုမှေးဖှားဖို့ရာစုနှစ်များစွာရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူမွေးဖွားခဲ့ကြဟုအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်လျက်ရှိ၏အဘယ်သူမျှမစံချိန်တင်ရှိသည်။ နေထိုင်ခဲ့-နှင့်သူအရေးပါသောကဲ့သို့သောနှောင့်အယှက်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်သူတဦးတည်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ကြောင်းကိုကာလ၏သမိုင်းပညာရှင်တို့ကလျစ်လျူရှုခဲ့ကြဇာတ်ကောင်-သငျ့သညျ။ ဟေရုဒ်မင်း, ရှင်ဘုရင်က, "သူငယ်" အသကျရှငျမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းသေချာစေရန်အသေခံရဖို့အများကြီးမွေးကင်းစစေပြီဟုမိန့်သည်။ ပိလတ်မင်းသည်သညျယရှေုထောင်ဒဏ်ပါပြီဟုလျှောက်၏, ယရှေုသညျကားစင်တင်ပြီးနောက်ထမြောက်တော်မူပြီဟုဆိုသည်။ ဤအထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များသောသူတစုံတယောက်မျှအချိန်သမိုင်းပညာရှင်ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရှိသည်သောတစ်ခုတည်းသောစံချိန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်ပါရှိသောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်ရပ်မှန်၏မျက်နှာကိုငါတို့သည်စစ်မှန်ဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုမှေးဖှားတောင်းဆိုလို့မရပါဘူး။ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်သောအကောင်းဆုံးကကမ္ဘာ၏ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီအကြားတစ်ဦးပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သခင်ယေရှု၏ထင်မွေးဖွားနှင့်သေခြင်းကိုရည်မှတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားထဲမှာဆက်လက်ဒါကထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထုံးစံနှင့်အလေ့အကျင့်များတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအမှားလည်းမရှိလျှင်အမှား, များအတွက်အရေးဆိုမှုလုပ်ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၏တရားသေအယူဝါဒထူထောင်သောသူတို့အားအစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်ပေါင်းဘော်။
ကမ္ဘာကြီးကိုနီးပါး 2,000 နှစ်ပေါင်းခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယုံကြည်မထားပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကိုယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယုံကြည်မထားဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့သူတို့ထဲကတဦးတည်းရာစေ့သောအစိတ်အပိုင်းကိုအသက်ရှင်ရန်သခင်ယေရှု၏သွန်သင်ချက်များအတွက်လုံလောက်အောင်မယုံကြည်ကြဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေဟာအဖြစ်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ရဲ့ဘဝနှင့်အလုပ်အတွက်ယေရှု၏သွန်သင်ချက်များကိုဆန့်ကျင်။ ယေရှု၏အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းသင်ကြားမှုအပြည့်အဝရစျယာနျခွငျးအားဖွငျ့လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ တကယ်တော့နှင့်ဒဏ္ဍရီအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်ကျနော်တို့ယေရှု၏သမိုင်းမွေးဖွားခြင်းနှင့်အသက်တာကိုရည်မှတ်ခြင်းမရှိအချက်အလက်များရှိပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ ဒဏ္ဍရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီတပါးအမြိုးသားဘာသာတရား၏အခြေခံဖြစ်ခရစ်ယာန်များစွာအားဖြင့်ကျင်းပပေမယ့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းတူလူတန်းစား၌တည်ရှိ၏နေကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကမ္ဘာ၏ကြီးစွာသောဘာသာတရားများစွာရှိထက်တကယ်တော့ဒီထက်အခြေခံထားပါတယ်။ ဤသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှားယွင်းသောဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်သလိုဘာသာတရားအားလုံးကိုမှားယွင်းသောဖြစ်ကြောင်းကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။ တိုင်း mythos အတွင်းအမှတ်တံဆိပ်ရှိကွောငျးဟောင်းစကားပုံရှိပါသည်။ တစ်ဦးကဒဏ္ဍာရီတစ်ဦးလေးနက်အမှန်တရားင်တစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏မှန်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောဘဝအတွက်ယုံကြည်ချက်အားဖြင့်အစောပိုင်းသမိုင်းအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်ကအကြိုးခံစားခြင်းနှင့်ယေရှု၏ပါဝါကိုချွေတာကြပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုတချို့လျှို့ဝှက်ချက်ပါဝါရှိရမည်; ဤနေရာတွင်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိတည်ရှိသည်။ မဆိုအကြီးဆရာမသို့မဟုတ်သင်ကြားမှု၏အသွင်အပြင်အချို့ဥပဒေ, သံသရာ၏တရား, ဒါမှမဟုတ်ရာသီ၏အဆိုအရဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှု၏ဂုဏ်သတင်းကိုမှေးဖှားသညျ့အခြိနျအသစ်ထင်ရှားသမ္မာတရားကိုပြဌာန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်သံသရာသို့မဟုတ်ရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုထိုအချိန်ကမသေခြင်းမှီသောလူတဦးတည်းအကြားရှိကွောငျးကိုယုံကြည်တစ်ဦးသညျယရှေုကိုယျခန်ဓာ၏မွေးဖွားပြီးသားဒီတော့မှီဘဲလျက်အကြောင်း, ရည်ညွှန်းသူလက်ခံရရှိနိုင်ဟုယူဆတော်မူသောသူတို့အားမသေခြင်း၏သင်ကြားမှုကိုထုတ် ပေး. နားလည် ကနှင့်သူ၏တပည့်ချေါခဲ့ကြသူတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုသူ့ကိုန်းကျင်ရှိကိုစုဝေးစေ၏။ ဒီမျှသမိုင်းရှိကွောငျး, မိမိအတွက်မသေနိုင်တဲ့ဘဝကိုရည်မှတ်နက်နဲသောအရာနှင့်အတူ unacquainted သူကလူသိမကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောနှင့်အချိန်အဘို့ပည့်တော်တို့ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , သူထို့နောက် left, သူ၏သွန်သင်ချက်များသည်သူ၏တပည့်များအားဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ခရစျတျောနှင့်သူ၏သွန်သင်ချက်၏ယုံကြည်ချက်အတွက်ဇွဲများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကသူ့မသေခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနောက်ခံခံယူချက်လူကိုအတွင်းရှိကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ငုပ်လျှိုးနေယုံကြည်ချက်ရှိသောအသင်းတော်သူတို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပုံစံသို့ပုံပျက်သောသွန်သင်ချက်များတွင်စကားရပ်ကိုတွေ့။